Xujjayda DDSI Oo Uga Mahad Celinaya Xukuumada Iyo Golaha Sare Ee Arrimaha Islaamka DDSI Kadib Markii Loo Fudaydiyay Hawlaha Diyaar Garowga Xajka Looguna Sameeyay Xarunta Magaalada Jigjiga Ee DDSI. - Cakaara News
Xujjayda DDSI Oo Uga Mahad Celinaya Xukuumada Iyo Golaha Sare Ee Arrimaha Islaamka DDSI Kadib Markii Loo Fudaydiyay Hawlaha Diyaar Garowga Xajka Looguna Sameeyay Xarunta Magaalada Jigjiga Ee DDSI.
Jigjiga(CN) Sabti-16-Aug-2014, Golaha Sare ee Arimaha Islaamka DDSI ayaa maal mahan ku guda jira hawlaha diyaar garowga ee ay u baahanyihiin dadka xujayda ah, kuwaas oo ay kamidyihiin diwaan galinta, wacyi galinta dhamaan shuruudaha looga baahanyahay dadka doonaya xaj gudashada, iyo siinta baasboorka (passport) oo hada kahor loo doonan jiray Addis Ababa iyo Diridhaba.
Dadaal dheer oo ay sameeyeen xukuumada DDSI iyo Golaha Sare ee arimaha islaamka DDSI ayaa lagu helay adeegan u fududaynaya in dad badan ay u diyaar garoobaan gudashada xajka. Hawlaha diyaarinta baasboorka oo wakhti dheer qaadan jiray islamarkaana loo doonan jiray xarumaha Addis Ababa iyo Diridhaba ayaa haatan xujayda loogu diyaarinayaa xarunta DDSI ee Caasimada Jigjiga. Wuxuuna haatan Golaha Sare ee Arimaha Islaamka Soomaalida Itoobiya ku dadaalay sidii ay xujay badani kutagi lahaayeen sanadkan xajka. Sidoo kale Goluhu wuxuu u diyaar garoobay wakhtiga ay xujaydu tagayaan inuu lawareego gaadiidka u dhaxeeya Jigjiga ilaa Addis Ababa si ay xujaydu isku meel u joogaan isagana war hayaan.
Gudoomiyaha Golaha Sare ee Arimaha Islaamka DDSI Sheekh C/raxmaan Xasan Xuseen ayaa sheegay in hogaaminta sare ee xukuumada DDSI iyo G/sare Arimaha Islaamka ay dadaal adag u sameeyeen sidii xujayda loogu fududayn lahaa hawlaha gudashada xajka oo ay ugu horeeyaan qaadashada baasboorka iyadoo wakhti xaadirkan lagu siinayo isla magaalada jigjiga islamarkaana ay ku helayaan si dhakhso ah.
Xafiiska G/sare ee Arimaha Islaamka DDSI oo ku jira hawlihii diyaar garaynta xujayda iyo diwaan galinta ayaa saaka si toos ah u bilaabay hawlaha xujayda u baahan baasboorka oo si dhakhso ah lagu siinayo iyagoo iska bixinaya 300 oo birr sidii hada kahorba lagu bixin jiray. Xujay fara badan ayaa isugu yimid barxada wayn ee xafiiska G/sare Arimaha Islaamka DDSI kuwaas oo aad ugu faraxsanaa hawlaha loo dhib yareeyay iyo dadaalka ay gashay xukuumada maanta ka arimisay deegaanka oo ay sheegeen in ay guulo taariikhi ah u sameysay shacabka Deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxayna aad ugu mahad celinayeen Hogaaminta Xukuumada uguna horeeyo Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, G/sare ee Arimaha Islaamka DDSI iyo Masuuliyiinta heer federaal ee iyaguna wax ka gaystay dadaalkan.